Fampahafantarana ny fikambanan’ny mpaneho an-tsary ny rakitra
Tao anatin’ny taona maro dia nahazo laka teo amin’ny fiainantsika andavanandro ny fanehoana ara-tsary ireo tahirin-kevitra sy fahalalana, ary tarehimarika isan-karazany. Hita eny amin’ny gazety, eny amin’ireny tambazotra sosialy ireny; ary ho an’ny ankamaroantsika dia hita eo anivon’ny asa an-davan’andro ihany koa izany. Ny asa famolavolana, famoronana ary fampiasana ny firaketan-kevitra an-tsary dia tsy taranja mitokana fa ampiharin’ireo/ampiasain’ireo injeniera, ny mpandalina, mpivarotra, ny dokotera, ny mpanao gazety, ny designers, ny mpianatra ary ny maro hafa ihany koa.
Na dia eo aza anefa izany lazany izany, ny ankamaroan’ireo fitaovana hoenti-mampianatra ity taranja ity dia mifantoka amina fitaovana manokana, na amin’ny indostria na koa nataon’ny mpamorona hanatsarana ny asany fa tsy ahitana toro-lalana ahafahan’ny tsirariray mampitombo traikefa eo sy mivoatra arak’asa ao anatin’ity sehatra ity.
Ny Fikambanan’ny mpaneho an-tsary ny rakitra dia natsangana mba hanampiana ireo mpikambany eo amin’ny lafiny maha matihanina, mba hifampizarana torohevitra sy traikefa. Manantena izahay ireo fifaneraserana isan-karazany dia hiteraka ny atao hoe toro-lalana mazava afaka hoentin’ny tsirairay mivoatra arak’asa ao anatin’ity taranja ity, na io ho an’ireo vao misondrotra, na io ho an’ireo efa nilona ela tao amin’ito sehatra ito.
Manana ny toerany lehibe eo amin’ny karazan’asa maro ny fanehoana an-tsary ny rakitra. Isan’ireo karazan’olona mampiasa azy ity eo amin’ny andavanandrony ireto manaraka ireto:
manam-pahaizana manokana amin’ny fanehoana rakitra ho sary
manam-pahaizana momban’ny famolavolan-kevitra
manamp-pahaizana siantika sy mpandalina momban’ny rakitra
mpikaroka sy siantifika
mpanankanto mikirakira rakitra
ireo tsy matihanina amin’ny sehatra fa mampiasa tabilao eo amin’ny ndavan’androny
ireo hafa tsy voatanisa!
Mahafaly ny mahita ireo fahasamihafana ireo. Ny tanjonay dia ny hampivondrona ireo matihanina eo amin’ny taranja Fanehoana an-tsary ny rakitra rehetra, hoentina mampivoatra azy.
Ireto telo manaraka ireto ny tanjona kendrenay:
Ho toerana hamporisihina ny fiaraha-miasa matotra eo anivon’ny mpikambana hoenti-mamaha olana misy eo amin’ity sehatra ity. Hampiasaina ny Slack, sehatra fifanakalozan-dresaka, mba hahafahan’ny mpikambana mianatra sy mifanohana, mampiady sy mifanakalo hevitra, sy mampiranty ny asany.
Ho toerana hahitan’izay vao misondrotra sy efa matihanina ireo filazana momba ny fitadiavana asa, karazan-ketsika, ireo voka-panadihadiana mikasika ity sehatra ity (toy ito ifandihadiana isan-taona ito), ireo fifaninanana sy fizaràna mari-pankasitrahana, ary ny famintinana ireo fikarohana sy fironana misy eo anivon’ny sehatra.
Ho toerana hanitarana ny fahamatorana sy ny mahamatihanina ny sehatry ny fanehoana rakitra an-tsary. Hatreto dia maimaim-poana ny fidirana ho mpikambana. Fa rehefa mipetraka mazava ny tolotra afaka homenay dia mety hisy sarany izany hoentina manohana ireo fihaonam-be sy atrik’asa isan-karazany.
Ny fikambanana dia natsangan’i Amy Cesal, Mollie Pettit ary Elijah Meeks, izay manana traik’efa samihafa: Mollie dia mpiasa tena, nianatra momba ny tahirin-kevitra sy ny matematika ary ny fahalalana ny Tany. i Amy dia mpanao sary nomerika izay raiki-pitia amin’ny famolavolana angona sy tahirin-kevitra fony izy niara-niasa tamin’ny mpikaroka avy ao DC teo anivona mpanao asa soa iray. Nahazo mari-pahaizana Master in Information Visualization avy amin’ny MICA izy. i Elijah kosa dia injenieran’ny fanehoana rakitra ho sary any Sillicon Valley. Samy mino izy ireo fa ity fiaraha-mientana ity dia hampivoatra bebe kokoa ity sehatra ity.
Asaina ianao hiditra ho hiditra ho mpikambana. Raha te hizara hevitra na te handray anjara mavitrika kokoa, dia aza misalasala mandefa mailaka anay, manoratra etsy ambany, na amin’ny Twitter.
@curiouslemur studying Data Visualization — Security — Ballet — Languages — Diversity